Induction I-Brows Studs to Copper Pipes process Technology
Induction I-Brows Studs eya ku-Copper Pipes
Induction Brows izikopelo zethusi amapayipi zethusi
Umkhiqizi wamakhoyili wezicelo zokushisa zezimboni.
I-DW-UHF-40KW Isingeniso se-Brazing Systems - Amamojula amabili.
Izinto: I-Brass stud (usayizi: 25mm ubukhulu, 20mm ukuphakama)
amandla: 30 kW
Inselelo enkulu kulokhu inqubo yokukhishwa kwe-induction ukwenza isiqiniseko sokuthi ukwakhiwa kwekhoyili yikho okwenza ukuthi uchwepheshe awubeke ngendlela efanelekile. Ikhoyili yokufakwa kufanele ivumele i-Stud yesibili ukuthi ifudunyezwe ngaphandle kokuncibilikisa eyokuqala.
Okokuqala, isigaba sethusi se-electrolytic silinywa ensimbi yangaphambili ngothoshi wegesi ngenkathi kugcinwa isikhala esilinganayo phakathi kwamaphethelo. Ngemuva kwalokho, ujiko lwethusi luyafudunyezwa eduze nezinga lokushisa elidingekayo futhi ngenkathi amandla IVULIWE, uchwepheshe kufanele aqiniseke ukuthi ubeka ngesandla isitifiketi sethusi neringi lobhedu esikhungweni esibekiwe. Ngesikhathi senqubo yokubopha, ikhoyili yokungeniswa ihamba ngejubane lama-58 mm ngeminithi - 33 kW.
Uma amandla enyuka, ijubane liyaguquka.
Ishesha, ihlanzekile futhi iphephile Ukukhishwa kwesibalo inqubo
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi izikopelo zethusi zivuthwa, ithusi elicwebezelayo, izikopelo zethusi ezingapheli, yethusi lethusi, I-High Frequency Brazing ithusi, i-induction brazer, ukufakwa kwesibhakela ngethusi, ukufakwa kwesibhakela ngethusi, Ukufakwa kwesibhakela kwesibhamu sesethusi, imishini yokusebenza yokubopha, uhlelo lokungenisa impahla, amayunithi wokufaka ama-induction Imeyili kwemikhumbi
Ukungeniswa kwe-Brazing Carbide To Steel
induction brazing inqubo yensimbi engagqwali